ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ, မျက်မှန်မှန်ဘီလူး Coates, တရုတ်အတွက်မျက်မှန်မှန်ဘီလူးအင်္ကျီကိုထုတ်လုပ်သူမှုတ်ဆေးဘူး
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက် > Optical မှန်ဘီလူးသည် nano Coating
Optical မှန်ဘီလူးသည် nano Coating ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆန့်ကျင်လက်ဗွေရေမှုံရေမွှား, မျက်မှန်မှန်ဘီလူး Coating ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မျက်မှန်မှန်ဘီလူးကုတ်အင်္ကျီ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မှန်ဘီလူးအဘို့အမြင့်သနျ့ရှငျးမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကောင်းသော Optical စွမ်းဆောင်ရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ပစ္စည်း Coating ပွတ်တိုက်မှု Resistance  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းပစ္စည်း Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိုးလေဝသ Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကိုခံနိုင်ရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် AF Coating က Non-hydrophili  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် transparent AF Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
AF Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ရေစိုခံ Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည် Nano Coating Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကောင်းသော Optical စွမ်းဆောင်ရည်
Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကောင်းသော Optical စွမ်းဆောင်ရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ပစ္စည်း Coating ပွတ်တိုက်မှု Resistance
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ပစ္စည်း Coating ပွတ်တိုက်မှု Resistance [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းပစ္စည်း Coating
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းပစ္စည်း Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
မိုးလေဝသ Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကိုခံနိုင်ရည်
မိုးလေဝသ Optical မှန်ဘီလူးအဘို့ကိုခံနိုင်ရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် AF Coating က Non-hydrophili
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် AF Coating က Non-hydrophili [P ကို roduct သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် transparent AF Coating [P ကို roduct သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
AF Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ရေစိုခံ Coating
AF Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်ရေစိုခံ Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည် Nano Coating Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်
ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည် Nano Coating Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon...
တရုတ်နိုင်ငံ Optical မှန်ဘီလူးသည် nano Coating ပေးသွင်း
အဆိုပါ optical ဖန်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင် Anti-fingerprinting ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမဆီပြန်ခံစားချက်ရှိပါတယ်, သတ္တုမျက်နှာပြင်၏တောက်ပြောင်မထိခိုက်ပါဘူး, သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေသည်, သန့်ရှင်းခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ခံနိုင်ရည်ခြစ်ရာ။ optical မှန်ဘီလူး Anti-လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်းအေးဂျင့်ဒီဘာဂင်နည်းလမ်း:
1. အရက်သို့မဟုတ် ultrasonic အတူ optical ဖန်ကိုရှင်းလင်း။
စင်ကြယ်သောအဝတ်ပေါ်ကို 2. ယို anti-လက်ဗွေရာဆီ, ညင်ညင်သာသာဖန်ခွက်ထဲပွတ်သပ်, 0.5-1 မိနစ်အဆင့်က 150 မိနစ်နဲ့ 30 မိနစ်မီးဖိုဝင်, ထို့နောက်အရက်အတူမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်အစက်အပြောက်ကိုချွတ်သုတ်, ဒဏ်ငွေလိုင်းများ, သင်ကနိုင်။
3. ဒါဟာမုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲမိနစ် 30 များအတွက်သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစွန့်ခွာ, ပြီးတော့ ultrasonic အရက်အတူကသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်လက်ဗွေရေမှုံရေမွှား မျက်မှန်မှန်ဘီလူး Coating မျက်မှန်မှန်ဘီလူးကုတ်အင်္ကျီ မျက်မှန်ကုတ်အင်္ကျီ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား